कस्ती युवतीलाई श्रीमती बनाउन चाहान्छन् पुरुष ! जान्नुहोस | Samacharpati कस्ती युवतीलाई श्रीमती बनाउन चाहान्छन् पुरुष ! जान्नुहोस – Samacharpati
काठमाडौँ, १५ साउन । विवाह एउटा संयोग हो । विवाहअघि जे-जस्तो भएपनि विवाहपछि श्रीमान् र श्रीमतीबीच उचित तालमेल हुनु आवश्यक छ । त्यसैले त नेपाली समाजमा भन्ने गरिएको छ, श्रीमान् र श्रीमती भनेका एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । परिवाररुपी रथ हाँक्नका लागि दुबै पाङ्ग्राको जरुरी र महत्व हुन्छ । एउटा पाङ्ग्रा नभई रथ गुड्दैन ।
विवाहलाई बन्धन पनि भनिन्छ । त्यो बन्धन मायाको हो र जिम्मेवारीको पनि । विवाहलाई सम्झौता पनि भनिन्छ । अलग पृष्टभूमीमा हुर्किएका युवा र युवती जब दम्पती बन्छन्, उनीहरुले आफ्ना कतिपय कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ । आफ्ना कति रहर, इच्छा, आनीबानी, प्रवृत्ति, व्यवहार त्याग्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त हुँदैन । कलह मात्र हुन्छ । दाम्पत्य कलहले दुई जनाको जीवन मात्र होइन, एउटा सिंगो परिवार नै तहस-नहस बनाइदिन्छ । त्यसैले विवाह एक यस्तो मोड हो, जहाँबाट मान्छेको अर्को जीवन सुरु हुन्छ । विवाह जीवनको अर्को अध्याय हो ।
विवाह गर्ने निर्णय सामान्य होइन । विवाह कुनै सामान्य रहर र खेल पनि होइन । विवाहले सुदूर भविष्य र पुस्तौ पुस्ताको मार्गरेखा कोर्ने भएकाले यसलाई निकै गंभिरतापूर्वक लिइन्छ । अतः विवाहको यो संवेदनशिलता बुझेकाहरुले विवाह गर्नुअघि आफ्नो पार्टनरमा केही गुण खोज्ने गर्छन् । यस्तो गुण पुरुषले महिलामा खोज्छन्, महिलाले पुरुषमा पनि । यहाँ चाहि विवाहको तयारीमा रहेका पुरुषले महिलामा कस्तो गुण खोज्छन् भन्ने चर्चा गरिएको छ ।
यी ८ गुण भएका युवतीहरु तपाइका लागि योग्य हुदैनन् (हेर्नुहोस भिडियो)
एनटिभी प्लसमा हाँस्य सिरियल ‘कुरा मात्रै भो’
“विदेशिने युवा” (कविता)
खेल मैदान स्त्तोरोन्नतीका लागि समिती गठन
चेतन सापकोटाको सन्देशमुलक गीत ‘बुद्ध फर्काइ देउ’
गायिका सन्जु न्यौपानेको तिज गित “दर खान” सार्बजनिक (भिडियो सहित)